नोफलो, डोफलो, यूजीसी, वा प्रायोजित लिंकहरू के हुन्?
प्रत्येक दिन मेरो इनबक्स स्प्यामिंग एसईओ कम्पनीहरूसँग आक्रोशित छ जो मेरो सामग्रीमा लिंकहरू राख्न भिक्षा गर्दै छन्। यो अनुरोधहरूको अन्तहीन प्रवाह हो र यसले मलाई चिढचिढ्याउँछ। यहाँ कसरी ईमेल सामान्य रूपमा जान्छ ...
मैले याद गरे कि तपाईले यो कीवर्ड लेख गर्नुभयो। हामीले यसमा विस्तृत लेख पनि लेख्यौं। मलाई लाग्छ कि यसले तपाईंको लेखमा ठूलो थप बनाउनेछ। कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं लि article्कको साथ हाम्रो लेख सन्दर्भ गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
पहिले, तिनीहरूले सँधै लेख लेख्छन् यदि उनीहरूले मलाई मद्दत गर्न खोजिरहेका छन् र मेरो सामग्रीलाई सुधार गर्न खोज्दैछन् जब मलाई थाहा छ उनीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छ ... स्थान राख्नुहोस् backlink। जबकि खोज इन्जिनहरूले सामग्रीको आधारमा तपाईंको पृष्ठहरू ठीकसँग अनुक्रमणिका गर्दछन्, ती पृष्ठहरू प्रासंगिक, उच्च-गुणहरूको साइटहरूको संख्यामा क्रमबद्ध हुनेछ जुन उनीहरूसँग लिंक हुन्छ।
नफोलो लिंक के हो? लि follow्क पछ्याउनुहुन्छ?
A खाली लिंक एन्कर ट्याग एचटीएमएल का बीच प्रयोग गरीन्छ खोजी ईन्जिनलाई लिंकलाई वेवास्ता गर्न जब यो कुनै प्राधिकरण पास गर्ने आउँदछ। यो कच्चा HTML जस्तो देखिन्छ:
अब, जब खोज ईन्जिन क्रोलरले मेरो पृष्ठ क्रल गर्दछ, मेरो सामग्री अनुक्रमणिका गर्छ, र स्रोतहरूलाई फिर्ता प्राधिकरण प्रदान गर्न ब्याकलिks्क निर्धारण गर्दछ ... यसले उपेक्षा गर्दछ nofollow लिंकहरू। जहाँसम्म, मैले लेखेको सामग्री भित्र गन्तव्य पृष्ठमा लिंक गरेको भए, ती ए an्कर ट्यागहरूको nofollow विशेषता छैन। ती भनिन्छ Dofollow लिंकहरू। पूर्वनिर्धारितद्वारा, प्रत्येक लि्क रैंकिंग अधिकार पास गर्दछ जबसम्म rel विशेषता थपिएको हुँदैन, र लिंकको गुणवत्ता निर्धारित हुँदैन।
चाखलाग्दो कुरा के हो भने, नफोलो लिंकहरू अझै पनी गुगल खोजी कन्सोलमा देखाईन्छ। यहाँ किन छ:
त्यसोभए डोफोलक लि Links्कहरू कहिँ पनि मेरो रking्कि ?मा मद्दत गर्दछ?
जब ब्याकलिinking्कको माध्यमबाट र्या ranking्कमा हेरफेर गर्ने क्षमता पत्ता लागेको थियो, एक अर्ब डलरको उद्योगले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको मार्गमा सर्न मद्दत गर्न रातोरात शुरू गर्‍यो। एसईओ कम्पनीहरु स्वचालित र निर्माण गरीयो लिंक फार्महरू र खोज ईन्जिनलाई हेरफेर गर्न ग्याँसमा लाग्यो। अवश्य पनि, गुगलले याद गर्यो ... र यो सबै क्र्यास हुँदै आएको थियो।
गुगलले यसको एल्गोरिदमलाई सुधार गर्‍यो साइटहरूको श्रेणी निगरानी गर्न जुनसँग ब्याकलिंकहरू स .्कलन गरियो प्रासंगिक, आधिकारिक डोमेन। त्यसोभए, हैन ... कतै लिंकहरू थप्नाले तपाईंलाई मद्दत गर्दैन। अत्यधिक प्रासंगिक र आधिकारिक साइटहरूमा ब्याकलिlin्कहरू जुटाउन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। एकदम उल्टो, लिंक स्प्यामिंगले तपाईंको रैंक गर्ने क्षमतालाई चोट पुर्‍याउने छ किनकि गुगलको खुफिया जानकारीले पनि हेरफेर गर्न सक्दछ र यसको लागि तपाईंलाई दंड दिन्छ।
के लिंक पाठ्य कुरा हो?
जब व्यक्तिले मलाई लेख सबमिट गर्छन्, म प्राय: उनीहरूको एch्कर पाठ भित्र अत्यधिक स्पष्ट कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गरेको देख्छु। म साच्चै विश्वास गर्दिन कि गुगलको एल्गोरिदम यति हास्यास्पद छन् कि तपाईको लिंक भित्र रहेको पाठ मात्र कुञ्जी शब्द हो। यदि गुगलले लिंकको वरिपरि प्रासंगिक सामग्रीको विश्लेषण गर्‍यो भने म छक्क पर्दिन। मलाई लाग्दैन कि तपाईंलाई आफ्ना लिंकहरूसँग स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। जब श doubt्का लाग्छ, म मेरा ग्राहकहरुलाई सिफारिस गर्दछु पाठकको लागि के उत्तम छ। किन म बटनहरू प्रयोग गर्दछु जब म साँच्चिकै व्यक्तिहरू आउटबाउन्ड लिंक हेर्न र क्लिक गर्न चाहन्छन्।
र यो नबिर्सनुहोस् कि एन्कर ट्याग दुबै प्रस्ताव गर्दछ पाठ साथै एक शीर्षक तपाइँको लिंक को लागी। शीर्षक स्क्रिनरिडरहरू तिनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूको लिंकलाई वर्णन गर्न मद्दतको लागि पहुँच सुविधाहरू हुन्। जहाँसम्म, धेरै ब्राउजरहरूले तिनीहरूलाई प्रदर्शन पनि गर्दछ। एसईओ गुरुहरु यसमा असहमत छन् कि शीर्षक पाठ राख्दा तपाइँको कुञ्जीपाटीहरूको लागि रँकिंगलाई मद्दत गर्न सक्छ। जे भए पनि, मलाई लाग्छ कि यो एक उत्तम अभ्यास हो र थोरै पजाज्जे थप गर्दछ जब कसैले तपाईंको लिंकमा माउस दिन्छ र टिप प्रस्तुत गर्दछ।
प्रायोजित लिंकहरूको बारेमा के हुन्छ?
यहाँ दैनिक ईमेलमा मैले प्राप्त गरेको अर्को ईमेल छ। म वास्तवमा यसको जवाफ दिन्छु ... व्यक्तिलाई सोध्नु हुन्छ यदि उनीहरूले मलाई मेरो प्रतिष्ठा जोखिममा राख्न भनिरहेका छन्, सरकार द्वारा जरिवाना लिनुहोस्, र खोज इञ्जिनहरूबाट सूचीकृत हुनेछ। यो हास्यास्पद अनुरोध हो। त्यसकारण कहिलेकाँही म जवाफ दिन्छु र तिनीहरूलाई भन्छु मँ खुशी हुन्थें ... यसले प्रति ब्याकलिंक $ १,, 18,942,324.13 XNUMX२,XNUMX२.XNUMX.१XNUMX खर्च गर्नुपर्नेछ। म अझै पनि कसैलाई पैसा तार गर्नको लागि पर्खिरहेको छु।
मैले याद गरे कि तपाईले यो कीवर्ड लेख गर्नुभयो। हामी तपाइँलाई हाम्रो लेख [यहाँ] स pay्केत गर्न तपाइँको लेखमा एक लिंक राख्न तपाइँलाई तिर्न चाहन्छौं। Dofollow लिंकको लागि तिर्न कति खर्च हुन्छ?
यो वास्तवमै कष्टप्रद छ किनभने यसले शाब्दिक रूपमा मलाई केहि चीजहरू गर्न अनुरोध गरिरहेको छ:
गुगलका सेवा सर्तहरू उल्ल .्घन गर्दै - तिनीहरूले मलाई मेरो भुक्तान गरिएको लिंक गुगलको क्रॉलरमा बदल्न आग्रह गरिरहेका छन्:
कुनै लिंकहरू हेरफेर गर्न को लागी PageRank वा गुगल खोजी नतिजाहरूमा साइटको श्रेणीकरणलाई लि scheme्क योजनाको हिस्सा र गुगलको उल्ल .्घन मान्न सकिन्छ वेबमास्टर दिशानिर्देशहरू.
गुगल लिंक योजनाहरू
संघीय नियमहरु को उल्लंघन गर्दै - तिनीहरूले मलाई सिफारिसमा FTC दिशानिर्देशनहरूलाई उल्ल .्घन गर्न भनिरहेका छन्।
यदि त्यहाँ अनुमोदनकर्ता र मार्केटर बीचको सम्बन्ध छ जुन उपभोक्ताहरूले आशा गर्दैनन् र यसले उपभोक्ताहरूले अनुमोदनलाई कसरी मूल्याate्कन गर्दछन् त्यसले असर पार्छ, त्यो जडान खुलाउनु पर्छ।
FTC समर्थन गाइड
मेरो पाठकहरूको ट्रस्टलाई उल्लंघन गर्दै - तिनीहरूले मलाई मेरो आफ्नै श्रोताहरुलाई झुठो हुन भनिरहेका छन्! एक दर्शक जुन मैले १ years बर्ष सम्म काम गरें निम्नको साथ निर्माण गर्नका साथ विश्वास प्राप्त गर्न। यो असुविधाजनक छ। यो ठ्याक्कै किन तपाईले मलाई प्रत्येक लेखको हरेक सम्बन्धको खुलासा देख्नुहुनेछ - चाहे यो सम्बद्ध लिंक हो वा व्यापारमा साथी हो।
गुगलले सोध्यो कि प्रायोजित लिंकहरूले यो प्रयोग गर्दछ nofollow विशेषता। यद्यपि, अब उनीहरूले यो परिमार्जन गरेका छन् र भुक्तान लिंकहरूका लागि नयाँ प्रायोजित विशेषता छ:
लि Mark्कहरू मार्क गर्नुहोस् जुन विज्ञापन वा सशुल्क प्लेसमेन्टहरू हुन् (प्राय: भुक्तान गरिएका लिंकहरू भनिन्छ) प्रायोजित मानको साथ।
गुगल, क्वालीफाई आउटबाउन्ड लिंकहरू
ती लिंकहरू निम्न अनुसार संरचित छन्:
किन ब्याकलिkers्करले केवल टिप्पणीहरू लेख्दैन?
जब PageRank पहिलो पटक छलफल भएको थियो र ब्लगहरू दृश्यमा सारियो, कमेन्टि pretty सामान्य थियो। यो मात्र कुराकानी गर्नका लागि केन्द्रीय स्थान थिएन (फेसबुक र ट्विटर अघि), यसले श्रेणी पनि पार गर्‍यो जब तपाईं आफ्नो लेखक विवरणहरू भर्नुहुन्छ र तपाईंको टिप्पणीहरूमा लिंक समावेश गर्नुभयो। टिप्पणी स्पाम जन्म भएको थियो (र आजकल समस्या अझै छ)। सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली र टिप्पणी प्रणालीहरूले टिप्पणी लेखक प्रोफाइलहरू र टिप्पणीहरूमा Nofollow लिंकहरू स्थापना गर्न लामो समय लिएन।
गुगलले वास्तवमा यसका लागि बिभिन्न विशेषतालाई समर्थन गर्न सुरू गर्यो, यूजीसी। यूजीसी प्रयोगकर्ता उत्पन्न सामग्री को लागी एक परिवर्णी शब्द हो।
तपाईं सुविधाहरूको संयोजन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। WordPress मा, उदाहरण को लागी, एक टिप्पणी यस्तो देखिन्छ:
बाह्य अर्को विशेषता हो जुन कि क्रोलरहरूलाई थाहा छ कि लिंक एक मा जाँदैछ बाह्य साइट।
के तपाईंले अधिक डोफलो लिंकहरू प्राप्त गर्न ब्याकलिink आउटरीच गर्नुपर्छ?
यो इमानदारीतापूर्वक मसँग झगडाको ठूलो बिन्दु हो। मैले माथि प्रदान गरेको स्प्याम ईमेलहरू साँच्चिकै उत्तेजक छन् र म तिनीहरूलाई रोक्न सक्दिन। म दृढ विश्वासी हुँ जुन तपाईंलाई आवश्यक छ कमाई लिंकहरू, उनीहरूको लागि नसोध्नुहोस्। मेरो राम्रो मित्र टम ब्रोडबेकले यसलाई राम्रो नाम दिए विच्छेदन। म मेरो साइटबाट हजारौं साइटहरू र लेखहरूमा लिंक गर्दछु ... किनकि उनीहरूले लि earned्क प्राप्त गरे।
त्योले भन्यो, मलाई व्यापार गर्न मलाई पुग्ने समस्या छैन र यदि उनीहरू मेरो श्रोताको लागि मूल्यको लेख लेख्न सक्छन् भनेर सोधेर। र यो असामान्य छैन कि त्यहाँ छ dofollow त्यो लेख भित्र लिंक गर्नुहोस्। म धेरै लेखहरू अस्वीकार गर्दछु किनकि व्यक्तिले पेश गरेको व्यक्तिले यसमा स्पष्ट ब्याकलि a्कको साथ भयानक लेख प्रदान गर्दछ। तर म अरू धेरै प्रकाशित गर्दछु जुन शानदार लेखहरू हुन् र लि used्कको लि used्क जुन मेरो पाठकहरूको लागि मूल्यवान हुनेछ।
म आउटरीच गर्दिन ... र मसँग लगभग ११०,००० लिंकहरू छन् जुन लिंकमा फिर्ता जोडिएको छ Martech Zone। मलाई लाग्छ कि यो साइटको म लेखहरूको गुणवत्ताको प्रमाण हो। तपाईंको समय उल्लेखनीय सामग्री प्रकाशित गर्नमा खर्च गर्नुहोस् ... र ब्याकलिks्कहरू अनुसरण गर्नेछन्।
टैग: ब्याकलिंक आउटरीचब्याकलिinking्कbacklinksटिप्पणी लिंकहरूप्रकटीकरणdofollowdofollow लिंकहरूसंघीय व्यापार आयोगftcगुगल खोजी कन्सोलगुगल सेवा सर्तहरूGoogle +लिंक कमाईलिंक गुणस्तरलिंक निर्माणnofollowनफोलो लिंकहरूजैविक खोज रैंकिंगसशुल्क लिंकहरूगुणस्तर लिंकहरूrelrel dofollowrel nofollowrel प्रायोजितrel ugcखोज इञ्जिन क्रलरहरूखोज रैंकिंगप्रायोजित लिंकहरूUGCयूजीसी लिंकहरूवर्डप्रेस डोफलोवर्डप्रेस नफोलो
जनवरी 21, 2007 1:35 बजे
Dofollow प्लगइन डग औंल्याउनुभएकोमा धन्यवाद। मलाई थाहा थियो कि WordPress ले टिप्पणीहरूमा लिङ्कहरूमा rel = "nofollow" थपेको छ, र म निश्चित रूपमा तपाइँको तर्कसँग सहमत छु कि जबसम्म टिप्पणीहरू मध्यस्थ गरिँदैछ, टिप्पणीहरूमा छोडिएका कुनै पनि सान्दर्भिक लिङ्कहरू उनीहरूको उचित क्रेडिटको योग्य छन्।
जनवरी 22, 2007 2:42 बजे
टिप को लागी धन्यवाद; मैले भर्खर प्लग-इन स्थापना गरें (पूर्ण रूपमा पीडारहित प्रक्रिया।)
एक अन्तर्वार्तामा एक टिप्पणी स्प्यामरले भने:
"के Google, Yahoo र MSN ले "पछ्याउँदैन" लिङ्कहरूलाई सम्मान गर्ने पहलले साम र उहाँका मानिसहरूलाई पराजित गर्नेछ? "मलाई लाग्दैन कि यसले छोटो, मध्यम वा दीर्घकालीन रूपमा धेरै प्रभाव पार्छ।"
पूरा अन्तर्वार्ता यहाँ छ:
जनवरी 22, 2007 5:56 बजे
मार्टिन, उत्कृष्ट लेख। मलाई अचम्म लाग्छ कि गत वर्ष उनको काम कति गाह्रो भयो!
म कुन लिङ्कलाई पछ्याउन चाहन्छु भनेर छनोट गर्ने कुनै तरिका छ (वाह, जिज्ञासु भाषा निर्माण मैले बनाएको)? कारण यो हो कि जब मैले केही खराब साइटलाई यसमा खराब जानकारीको साथ सन्दर्भ गर्छु, म यसलाई धेरै प्रचार गर्न चाहन्न। सेन्सरशिपको रूपमा होइन (यदि मैले आफ्नो भन्दा धेरै फरक राजनीतिक विचारलाई सन्दर्भ गर्छु भने, तर यदि यो राम्रोसँग स्थापित र राम्रोसँग राखिएको छ भने, मलाई यसलाई प्रवर्द्धन गर्न कुनै समस्या छैन), तर एन्ट्रोपीसँग लड्ने र तल खन्ने तरिकाको रूपमा। खराब सामग्री।
मलाई म्यानुअल रूपमा लिङ्कहरू सम्पादन गर्न कुनै समस्या छैन। म सामान्यतया गुगल एनालिटिक्स बहिर्गमन लिङ्कहरू, लिङ्क शीर्षकहरू र आगन्तुकहरूको टाइपोग्राफी फिक्स गर्न टिप्पणीहरू सम्पादन गर्छु, तर यो केहि हदसम्म स्वचालित गर्न राम्रो हुनेछ।
अवश्य, theUg! तपाईंले rel=”nofollow” कुनै पनि लिङ्क भित्र थप्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं गुगलले श्रेणीकरण गर्न चाहनुहुन्न। उदाहरण:
हो, तिनीहरूलाई मेटाउन प्रयास गर्नु भन्दा सजिलो हुन सक्छ। म मेरो ओपेराका नोटहरूमा त्यस्ता सबै प्राय: प्रयोग गरिएका तत्वहरू राख्छु (तपाईँको ब्राउजर भित्र जहिले पनि बिट्स, टुक्राहरू, र कोड स्निपेटहरू राख्नको लागि एकदमै सजिलो), त्यसैले यो वास्तवमै मेरो लागि प्रतिलिपि टाँस्ने काम हो।
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::28। बिहान
मैले यो भेट्टाएँ। सम्पर्क फारम मार्फत तपाइँलाई सम्पर्क गर्नु अघि जाँच गरिएको हुनुपर्छ।
मार्स 26, 2007 मा 5: 23 एएम
म डग सहमत छु। यदि तपाइँ जसरी पनि प्रत्येक टिप्पणी पढ्न र मध्यस्थ गर्ने समस्यामा जाँदै हुनुहुन्छ (जुन तपाइँ हुनुपर्दछ) तब यो उचित लिङ्कको साथ वास्तविक टिप्पणीहरूलाई पुरस्कृत गर्न अर्थपूर्ण हुन्छ।
तपाईंले परिणामको रूपमा थप "महान पोष्ट" टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर ती सिधै रिसाइकल बिनमा जान्छन्।
स्पष्ट स्प्यामरहरूसँग "SEO विशेषज्ञ" वा "वेब डिजाइन एटलान्टा" वा केहि कुञ्जी शब्द लोड गरिएको नामहरू छन्। वास्तविक नामहरू सामान्यतया "लिसा" वा "रोबर्ट" जस्ता वास्तविक नामहरू हुन्छन्।
मार्क्स 26, 2007 मा 2: 20 PM
राम्रो छ कि तपाईंले फलो नगर्ने मुद्दामा अडान लिनुभयो। नतिजा बारे कुनै टिप्पणी छ? के तपाईंले सोचेको परिणामहरू पाउनुभयो?
मार्क्स 26, 2007 मा 6: 11 PM
नतिजाहरू मेरो लागि त्यति महत्त्वपूर्ण हुनेछैन जति तिनीहरू तपाईंहरू जस्तै हुनेछन्! मेरो साइटमा टिप्पणी गर्नाले तपाईंको गुगल रैंकिंगमा मद्दत गर्नुपर्छ।
अप्रिल 27, 2007 मा 4: 29 PM
म एक Drupal-संचालित वेबसाइट चलाउँछु, त्यसैले यो rel=nofollow बिना स्थापना हुन्छ, र तपाईंले यसलाई थप्नको लागि प्लगइन स्थापना गर्नुपर्छ। मैले केहि समयको लागि यो गर्ने बारेमा भए तापनि, तर महसुस गरें कि त्यसो गर्नुको एकमात्र कारण यो हो कि मैले अन्य व्यक्तिहरूको साइटहरूमा छोड्ने टिप्पणीहरूले मलाई पृष्ठ श्रेणी दिइरहेको छैन, जहाँ मैले तिनीहरूलाई पृष्ठ श्रेणी दिइरहेको छु। मैले यसलाई यथास्थिति छोड्ने निर्णय गरें।
धेरै व्यक्तिहरूले आफ्ना टिप्पणीहरू मध्यस्थता गर्छन् त्यसैले साइटमा उपयोगी टिप्पणी छोड्न समय लिनेहरूलाई किन दण्ड दिने?
मैले मेरो साइटमा टिप्पणी गर्ने नीति थपेको छु ताकि मलाई खैरो क्षेत्रमा भएका टिप्पणीहरू मेटाउन नराम्रो लाग्न नपरोस्।
उदाहरणका लागि, यदि कसैले "राम्रो साइट" भन्ने टिप्पणी छोड्छ भने, म टिप्पणी मेटाउने प्रस्ताव गर्छु, जबसम्म तिनीहरूले URL फिल्ड खाली छोड्दैनन्। यस्तो नीति बिना, मैले लिङ्क जाँच गर्न र साइटमा आधारित निर्णय गर्न बाध्य महसुस गरें।
मई 21, 2007 मा 11: 38 PM
जानकारी को लागी धन्यवाद, म उत्सुक छु।
केही मानिसहरू भन्छन् कि पृष्ठहरू अझै पछ्याउने ट्याग मार्फत अनुक्रमित हुनेछन्। के यो सत्य हो?
मई 22, 2007 मा 6: 33 एएम
हो, सबै खोज इन्जिनहरूले नो-फलोलाई सम्मान गर्दैनन्। यो केवल यस्तो हुन्छ कि Google, ब्लकमा ठूलो केटा भएकोले, यद्यपि गर्छ। म लाइभ, आस्क वा याहूको बारेमा निश्चित छैन! पत्ता लगाउन केहि खन्ने हुन सक्छ।
जुन 20, 2007 मा 5: 10 PM
राम्रो काम - म धेरै धेरै विरोधी nofollow हुँ।
कुनै पनि लिङ्क गणना गरिनु पर्छ, वा तपाईंले लिङ्क अवस्थित हुन अनुमति दिनु हुँदैन। मलाई ती व्यक्तिहरू थाहा छ जसले जानाजानी आफ्ना पोष्टहरूमा लिङ्कहरूमा nofollow थप्छन् ताकि तिनीहरूसँग एक टन आउटबाउन्ड लिङ्कहरू हुनेछैनन्, सिद्धान्तको साथ कि साइटहरू जुन तिनीहरूमा लिङ्क गरिएको भन्दा बढी लिङ्क हुन्छन् कम PR प्राप्त गर्छन्।
यसले मलाई अन्तसम्म दुखी बनाउँछ।
Hobo SEO स्कटल्याण्ड
जुन 23, 2007 मा 2: 04 PM
हामीले हाम्रो समाचार ब्लगमा प्रयोगकर्ताको योगदान र खोज इन्जिन जुसको सन्दर्भमा सकारात्मक नतिजाहरू बाहेक अरू केही पनि नगरेका छौं। 🙂
जुलाई,, २०१ at 16::2007। बिहान
IMO rel = "nofollow" बिल्कुल बेकार छ, यसले टिप्पणी स्प्याम रोक्दैन किनभने स्प्यामरहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन्। टिप्पणी स्प्यामरहरू विरुद्ध उत्तम समाधान Akismet, खराब व्यवहार र क्याप्चा वा मानव प्रश्नहरू जस्तै प्लगइनहरू हुन्।
जुलाई,, २०१ at 22::2007। बिहान
हो? ती मूर्ख विकीहरू!
हामी सबैले तिनीहरूलाई nofollow प्रयोग गरेमा के हुन्छ भनेर सोच्नुहोस्?
एक राम्रो छ।
जुलाई,, २०१ at 29::2007। बिहान
नमस्ते, म सोध्न चाहन्छु कि WordPress, Yahoo 360, Blogger, आदि ले ब्लग पोस्टहरूमा "nofollow" प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्थात् यदि मैले मेरो ब्लगमा पोस्ट लेख्छु र त्यसमा लिङ्क राख्छु, के मेरो पोस्टको लिङ्क rel=nofollow मा परिवर्तन हुन्छ?
अगस्ट 6, 2007 बेलुका 10:50 बजे
फलो नगर्ने विशेषताको बारेमा उत्कृष्ट लेखको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने यो WordPress मा पूर्वनिर्धारित रूपमा स्थापित छ, मलाई शंका छ कि धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन कि यो त्यहाँ छ।
मलाई लाग्छ कि सबैलाई डाउनग्रेड गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत आधारमा टिप्पणीहरूलाई अनुमति दिने वा अस्वीकार गर्ने नीति धेरै राम्रो दृष्टिकोण हो।
अगस्ट 15, 2007 बेलुका 3:00 बजे
यो पोस्ट को लागी धन्यवाद! मलाई थाहा छ म यसलाई फेला पार्न अलि ढिलो भएको छु, तर मैले भर्खरै ब्लग गर्न थालेको छु र हेक वर्डप्रेसले मेरो लिङ्कहरूमा नोफलो किन राखेको छ भनेर पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेको छु। म तपाईंको ब्लग फेला पारेकोमा धन्यवाद dofollow मा राख्न जाँदैछु, हुनसक्छ यसले मेरो newby ब्लगमा थप टिप्पणी र अन्तरक्रियालाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
अगस्ट 16, 2007 मा 10: 22 AM
म निश्चित छैन कि यसले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागितामा कति सहयोग गर्छ। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि 'प्वाँखका चराहरू सँगै उड्छन्' त्यसैले तपाईं जडान गर्न र nofollow प्रयोग नगर्ने अन्य ब्लगहरूसँग भाग लिन अधिक उपयुक्त हुनुहुन्छ। लामो समय मा, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ लाभ छ।
मलाई यो मनपर्छ किनभने मलाई विश्वास छ कि ब्लगिङमा मेरो धेरै सफलताले कुराकानीमा तपाईंजस्ता मानिसहरूको सहभागितामा गरेको छ। मैले सबै फाइदा किन पाउनु पर्छ ?!
अगस्ट 26, 2007 बेलुका 6:58 बजे
यस जानकारीको लागि धन्यवाद डग, मैले म्यानुअल रूपमा मेरो लिङ्कहरूमा rel ट्यागहरू थपेको थिएँ तर टिप्पणीहरूको लागि यो दृष्टिकोणलाई कहिल्यै विचार गरेन। यद्यपि यसले अर्थ राख्छ, म सायद यो गर्न सुरु गर्नेछु किनकि मैले पहिले नै मेरा टिप्पणीहरूलाई ठूलो डिग्रीमा मध्यस्थता गरेको छु।
सेप्टेम्बर 10, 2007 मा 8: 48 AM
नमस्ते, मैले केही दिन अघि DoFollow प्लगइन स्थापना गरें, र मैले मेरा लेख र टिप्पणीहरूमा लिङ्क गरेको केही साना ब्लगहरूबाट केही धन्यवाद प्राप्त गरें।
उत्कृष्ट पहल पनि, तर कडा टिप्पणी/प्रयोगकर्ता व्यवस्थापनको संयोजनमा मात्र, अन्यथा ब्लगहरू हामीले सोचेभन्दा छिटो स्प्याम स्रोत बन्नेछन्।
13 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 8:31 बजे
डग, यो nofollow कुरा दुबै ब्लगर र कानूनी टिप्पणीकर्ताको लागि साँच्चै पीडादायी भएको छ... म चाहन्छु कि कसैले एउटा प्लगइन सिर्जना गर्न सकून् जसले व्यवस्थापकको इच्छामा nofollow सक्षम/असक्षम पार्छ। सबै nofollo प्लगइनहरू मैले सबै टिप्पणीहरू र/वा टिप्पणीकर्ताहरूमा nofollow ट्यागलाई रिप अफ प्रयोग गरेको छु। तपाईंले भन्नुभएको जस्तै, केही व्यक्तिहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको टिप्पणीहरू अनुमोदन गर्न छनौट गर्छन्
डिसे 14, 2007 मा 3: 15 AM
म सहमत छु, जेसी! WordPress ले त्यो प्रतिक्रिया चर्को र स्पष्ट प्राप्त गरेको छ, तर मलाई लाग्छ कि तिनीहरू खोज इन्जिनहरूको दबाबमा हुन सक्छन् कि त्यो विकल्प नबनाउन।
डिसे 14, 2007 मा 5: 52 AM
रमाइलो कुरा डग यो हो कि nofollow को "वकालत गर्ने" को बहुमत को आफ्नो साइटहरु / ब्लग मा nofollow विशेषताहरु छन्। मान्छेले केही बोल्छ र अर्कै गर्छ भन्ने कुरा रमाइलो होइन र ? मेरो ब्लगमा जस्तै यहाँ पनि dofollow भएकोमा तपाईंले मेरो प्रशंसा पाउनुभयो... यसले गुगलमा मेरो PR लाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरामा म पक्का छैन।
यो व्याख्या गर्नुभएकोमा धन्यवाद। म भर्खरै एउटा वेबसाइट सुरु गर्दैछु, र सबै ब्लग विकल्पहरू हेर्दै छु। दुर्भाग्यवश डिब्बाबंद ब्लग सफ्टवेयर जुन मैले मेरो साइटको साथ प्रयोग गर्न सक्छु बरफमा दुर्गन्धित हुन्छ, र मैले वर्डप्रेस प्रयोग गर्ने बारे सोचिरहेको छु, त्यसैले फलो वा फलो नगर्ने समस्याको बारेमा कुरा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। मसँग2वेबसाइटहरू छन्, एउटा गुगल ब्याक लिङ्कहरू बिना, र अर्को दिन मेरो दोस्रो साइटले 10 वटा गुगल ब्याकलिङ्कहरू नीलो बाहिर देखायो, र म साँच्चै उत्साहित थिएँ! म सधैं ब्लगहरूमा पोस्ट गर्छु र मलाई थाहा थिएन कि तपाईंले त्यस तरिकाले लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, (duh, newbie!) र अचानक मसँग Dawud Miracle बाट 10 लिङ्कहरू थिए - हेकमा उहाँ को हुनुहुन्छ???? मैले लिंकलाई उसको साइटमा फिर्ता गरें र महसुस गरें कि यो मैले पोस्ट गरेको धेरै धेरै ब्लगहरू मध्ये एक हो, धन्यवाद चमत्कार, यो एक चमत्कार थियो !!! त्यसपछि म यो कसरी भयो, र यो पहिले किन भएको थिएन भनेर सोचें! त्यसैले अब म बुझ्छु। जब मैले मेरो ब्लग सफ्टवेयर प्राप्त गर्छु मसँग निश्चित रूपमा फलो हुनेछ, न-फलो प्रकार। हामी सबैको लागि पर्याप्त सफलता छ .....